China Eyeshadow bhokisi kumucheto kupeta muchina fekitori uye vanotengesa | Sunkia
Chimiro chekuputira muchina 211 zvinoenderana nezvinodiwa pamusika ndiko kukura kwechigadzirwa chitsva, humburumbira-wepamusoro, wo Chuan PLC Taiwan wemview inobata skrini yekuona, kudzora kweparamende. Waini yakakora base, jewelry bhokisi, hwindo bhokisi, inogona zvakare kurongedza panze, bhegi rimwe rehwindo basa, kuputira mweya mabhudzi, kuunyana, kukanganisa, uye goridhe nesirivhodhi kadhibhodhi, yakakosha mapepa ekunamatira mhedzisiro haina kunaka, bronzing pepa pamusoro kukwenya uye zvimwe nyaya yekumisikidza muchina.
1. iyo yekuumba uye yekubatanidza kumhanya inokurumidza uye mhando iri kugadzikana.
2. zvigadzirwa zvekuumba zvisina kuomesa mweya, zvinhu zvakaita sekutenderera, chengetedza nzvimbo nzvimbo.
3. musimboti uri nyore, muchina wakagadzikana, uye mashandiro acho ari nyore. Vashandi vanongoda kudzidziswa kuri nyore kuti vawane basa.
4. Dunhu, hunyanzvi hwacho hwakakwirira, inova nguva dzinoverengeka kumhanyisa kweyakajairwa manyorerwo echinyorwa.
5. girazi furemu yekuputira muchina 211 inogona kuve yakashongedzerwa nenhamba huru yekutsanya yekugadzira mitsara, uye inogona zvakare kugadzirwa neyakajairwa muchina.lt iri nyore kufamba uye kuisa mune chero nzira.
Mukati nekunze kwekukora kwedanga
Ingo peta ukobvu
Pashure: Makona mana emucheto muchina
Zvadaro: Otomatiki grooving muchina